शास्त्र भन्छ : प्रेम र बिवाह ग्रहकै खेल हो, कुन अवस्थामा प्रेम र कुन अवस्थामा बिवाह हुन्छ जानी राखौ ! - IAUA
शास्त्र भन्छ : प्रेम र बिवाह ग्रहकै खेल हो, कुन अवस्थामा प्रेम र कुन अवस्थामा बिवाह हुन्छ जानी राखौ !
ramkrishna November 10, 2016	कुन अवस्थामा प्रेम र कुन अवस्थामा बिवाह हुन्छ जानी राखौ !शास्त्र भन्छ : प्रेम र बिवाह ग्रहकै खेल हो
काठमाडौं । जव कुनै केटा र केटि बीच प्रेम हुन्छ तव उनीहरु साथ साथ जीवन बिताउन चाहन्छन । विबाह गर्न चाहन्छन । केहि प्रेमी आफ्नो प्रेम लाई जीवन को रुपमा पाउन सक्छन भने केहि असफल हुन्छन । ज्योतिषीय रुपमा हेर्ने हो भने यो सबै ग्रह को खेल हो । ग्रह योग कुण्डलीमा के देखिन्छ ? ज्योतिष शास्त्रमा शुक्र ग्रह प्रेमको कारक मानिन्छ ।
कुण्डलीमा लग्न पन्चम सप्तम तथा एकदास भावमा शुक्रको सम्बन्ध हुदा व्यक्ति प्रेमी स्वभाव को हुन्छ । प्रेम हुनु र बिबाह हुनु अलग कुरा हो । ज्योतिष शास्त्र अनुशर पन्चम भाव प्रेम को भाव हो र सप्तम भाव बिबाहको । पन्चम भावको सम्बन्ध सप्तम भाव मा हुदा जोडी बिबाह बन्दनामा बाधिन्छन । नवम भावमा पन्चम भाव को शुभ समन्ध हुदा पनि दुइ प्रेमी पति पत्नी बनेर दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त गर्दछन ।
यदि तपाइको कुण्डलीमा यो अवस्था बनिएको छैन भने हुन सक्छ अन्य कुनै स्थीति को कारण तपाइको प्रेम सफल भइ पति पत्नी को रुपमा पाउन सक्नुहुन्छ । शुक्र यदि लग्न स्थान मा स्थिर छ अनि चन्द्र कुण्डलीमा पन्चम स्थानमा शुक्र छ भने पनि प्रेम बिबाह सफल हुन सक्छ ।
नवमाम्स कुण्डली लग्न कुण्डलिको शरीर अनि नवमाम्स कुण्डली मा सप्तम र नवामेश युक्ति छ भने प्रेम बिबाह पूर्ण रुपमा सफल हुन्छ । शुक्र ग्रह लग्नमा स्थित छ र लग्नेश पनि लग्नमा छ भने प्रेम बिबाह निश्चित हुन्छ ।
शनि र केतु पाप ग्रह हुन् तर सप्तम भाव मा यिनको युक्ति प्रेमीको लागि शुभ संकेत हो । राहु यदि लग्नमा स्थित छ भने नवामम्सा कुण्डली वा जन्म कुण्डली मध्ये कुनैमा पनि सप्तम तथा पंचामेस का कुनै प्रकारको दृस्टी वा युक्ति सम्बन्ध भएमा प्रेम बिबाह हुन्छ ।
लाग्न भावमा लग्नेश र चन्द्रको युक्ति भएमा पनि प्रेम बिबाह योग बन्दछ । सप्तम स्थानमा सप्तमेश को साथमा चन्द्रमा भए पनि प्रेम बिबाह योग बन्दछ । एकदश भाव पापी ग्रहको भाव हो तव प्रेमीको मिलन हुदैन अनि पापी ग्रहको अशुभ दृस्टी बाट मुक्त छ भने आफ्नो प्रेमी को साथ सात फेर लिन्छ । प्रेम बिबाहका लागि सप्तमेश वा एकादसेश मा परिबर्तन योग का साथ मंगन त्रिकोण वा नवम भावमा हुन्छ या फेरी द्वासेश तथा पंच्मेश को मध्य राशि परिबर्तन हुदा पनि शुभ योग बन्दछ ।
Previous Previous post: तपाईंका लागि कुन राशीसँगको प्रेम राम्रो ? हेर्नुस्, १२ वटै राशीबीचको अन्तरसम्बन्ध !
Next Next post: प्रेम वा विवाह असफल भए के गर्ने ?